Ukukhetha izipho abangane nezihlobo - ezimnandi esiteji nzima sokulungiselela loNyaka Omusha. I Kulindeleke kakhulu ebusika holiday - azisona isikhathi sokuzithela eziyisikhumbuzo engenamsebenzi ezokwenza kuphela isikhala emashalofini. Cool isipho loNyaka Omusha sizonikeza umamukeli isimo enkulu izinsuku eziningi, futhi amasonto. Yini lokukhetha?
Cool isipho loNyaka Omusha: efudumele
Inketho esihle - izinto efudumele futhi ukuhleka ngesikhathi esifanayo. Cool isipho loNyaka Omusha ukuthi kufanelekile noma iyiphi yobudala kanye ocansini - ngengubo ne imikhono. Lo mkhiqizo ikuvumela ukwenza lutho, kusukela imidlalo kwithebhulethi kanye yokuqedela of sweaters wathungela. Esinye isixazululo - a Jedi ijazana lasebusuku isembatho (esingcono kakhulu abalandeli "Izimpi Star").
Uma umuntu engibathandayo ukumangala ehlosiwe, has a ukuncokola nothando wabazalwane bethu, ukukhetha samanje Kulula kakhulu kuye. Cool isipho loNyaka Omusha - noboya isigqoko, ikhanda eliqoshiwe cat, ngezindlebe zayo ezihlekisayo. Lokhu inhlobo yento unika ukubukeka isimo ukudlala, yena uzokuthanda insikazi. Umkhiqizo kungabuye wathungela. Inketho okunye for guys - shapka- "ngesilevu" nge detachable Ezansi. Ngesicelo into umnikazi kungaba ibe cap abavamile. Ngo kakhulu emakhazeni ashubisa umnkantsha "ngesilevu" ungumbonisi ukuvikelwa eliphumelelayo ebusweni.
Uma umamukeli isipho uhlala efulethini ne izibuya abandayo isikhundla londoloza sneaker efudumele kakhulu ehlanganisa izimpaphe phansi njengoba yamathebhu.
Akukho lutho kulula kuka ukuhlela ukumangala uyabajabulela izinyo elimnandi. Yiqiniso, lokhu akusho ukuthi ukhuluma ngani amabhokisi zezwe emaswidi amakhekhe. Cool isipho loNyaka Omusha - ithuluzi Chocolate isethi. Umngane noma ilungu lomndeni othanda amnandi, cishe ngeke lomcabango yokudla impintshisi noma i ukusonta adjustable, ubukeka akuhlukile samanje, kodwa wadala kusuka ushokoledi. Ungase futhi uhlale ngesikhathi izingalo amnandi.
Uma umamukeli isipho akawuthandi ushokoledi marshmallow, futhi kulula ukuba yiyo. Kuyokusiza kuzuzwe lokhu yokusaswidi ehlotshiswe izithombe umngane, isibonelo, izingane. Yiqiniso, usebenzisa inki ezidliwayo, uthambile ngakho ungadla ngokuphepha.
Isimanga ukumangala kalula futhi othandekayo unesithakazelo ezemidlalo. Cool isipho loNyaka Omusha indoda othanda ukuhamba ngebhayisekili, hhayi okuvalelisa naye ngisho phakathi nenkathi ebandayo, - LED-ikhanda, senzelwe amasondo. imikhiqizo enjalo ongabonisa abafika kwabangu-10 izithombe elikhanyayo. Basuke ifakwe umshini wokubonisa izinga lejubane esakhelwe, isivikelo yokulwa umswakama. Ngaphezu kwalokho, kuyonciphisa ingozi iyiphi azichaye ngobusuku ogibele.
Playing eqhweni - kumnandi ukuzijabulisa, okuyinto ngosuku olwandulela holidi bangakhumbula abantu babo bonke ubudala. Weqhwa banezimfanelo ifomu lihle, kudala iqhwa Blaster. Ukwethulwa kwe "amagobolondo" by Isifaniso nge Slingshot abavamile. Sasinika isikhali esinabantu ezintathu noma ezine, ungahlela emdlalweni ongenakulibaleka.
Yini ukunikeza abavakashi
Kuyinto Akunzima neze ukumjabulisa kumngane noma esihlotsheni ochitha isigamu ukuphila kwakhe endleleni hhayi ngaphandle ukuncokola. Umuntu onjalo bayokwazisa ipotimende-scooter, okuyokwenza ukuba Breeze ukuya esiteshini noma isikhumulo sezindiza amahhovisi, isikhathi fun egumbini lokulinda.
Dude ungeke ucabange ukuhamba ngaphandle ncwadi emnandi, kusiza ukudlula endleleni? ukumangala ezihlekisayo ngaye kuyoba incwadi icala noma ukumboza, wafana naye ikhava yencwadi. into enjalo ngeke kusize kuphela ukugcina amabhuku ukuphepha, kodwa kuzophinda kusimangaze ezizungezile imibhalo yokuqala. Isibonelo: "kanjani ukuphuza kahle ukushayela? Iseluleko Expert. "
Yini ukukhetha izipho fun abangane ngosuku olwandulela uNcibijane, uma kuziwa abayimilutha imoto-ukushayela? Bayoba ayakwazisa ukuthola massage Imibhobho esemzimbeni eyenzelwe esihlalweni. Ungase futhi ucabangele inketho yokukhokha ukuze kakhulu ukushayela izifundo, ngemva kwalokho omunye awusoze ulahlekelwe ukuzithiba ezimweni indlela enzima.
Okunye izipho fun
Amantombazane amaningi uthanda ukuqoqa izikhwama. A kwalokho omkhulu izikhwama Iqoqo emuva kuyoba bamba umbukwane, ezibonakala nsé isinkwa nenyama. Modern futhi ibhizinisi-efana ukunikeza umniniso Bag, ikhibhodi eliqoshiwe. Ekugcineni, ungakwazi bajabule umngane wakhe, njengoba beye ethulwa umkhiqizo wakhe, elibonisa ngesifonyo kumnandi bestial.
Funny izipho engabizi loNyaka Omusha - kukhanya izibuko emiselwe nogologo. Futhi lokhu iqoqo izakhi njengoba ziyobe esikhanyayo ngemibala ehlukene. Abenzi kuphela ukunikeza esimweni zemikhosi, kodwa futhi ukuqeda ukudideka nge lapho ingilazi kuyinto kabani. fun Ikakhulukazi ukusebenzisa imikhiqizo efana ebumnyameni, bona ngempumelelo esikhundleni amakhandlela.
Umbhangqwana osanda kushada bayokwazisa ukumangala ezihlekisayo, njengoba amaphinifa, ekwakhiweni okwenziwa isitayela Unyaka omusha. Lokhu kuzokuvumela ukuba nomuzwa Eqhweni Ntombazane kanye Santa Claus futhi alethe ezihlukahlukene ukuze kwansuku ukupheka inqubo.
Kulabo namanje abangazange yanquma okwamanje nabathandekayo, okukhiphayo kungaba imifanekiso-premium. Inketho engcono - a statuette "Oscar", okuyinto ngempela isethulo ukuhambisana inkulumo enhle kakhulu. Kusho kubalulekile ukuze uthumele futhi afanelwe, okungaba yokuziqhenya ngayo umamukeli isipho. Than babeyoba ehlekisa, ngcono, ngakho asigcini ukundiza fancy.
Akubalulekile lapho ekhetha khona nabangani bakho uthembele ezihlukahlukene izitolo isipho. Fun izipho loNyaka Omusha, ngezandla zakhe esenzelwe othandekayo, ngeke ungakuthandi. Ngokwesibonelo, ungakha Collage isithombe, esekelwe engcono isibhamu ngokubambisana, walondoloza kwabavela iholide ngonyaka odlule.
Uma ufuna ukunikeza imali othandekayo, akudingekile ukubeka imali imvilophu. Ungakha imali yakhe isixha siqu noma wezimbali. isipho esinjalo kungaba mnandi futhi esisebenzayo ngesikhathi esifanayo.
Yini ongayinika umfana iminyaka emibili yobuhlobo? Isipho esingavamile esivela enhliziyweni